dayniile » Ururuka maamula abaalmarinnada Oscar oo kulan degdeg ah leh
Weinstein ayaa si wayn u diiday eedaymaha loo soo jeediyay.Arrinta kale ee soo korortayna waxay tahay in booliiska magaalada New York ay BBC-da u sheegeen in ay raadinayaan shaqsiyaad ay wax ka waydiiyaan eedaymahan ka dhanka ah Weinstein ee 2004tii, booliiska New York faahfaahin dheeri ah kama bixinin arrintaas.
Filimo badan oo uu soo saaray Harvey Weinstein ayaa ku guulaystay abaalmarinno ay akaadeemiyaddu bixiso
Ururuka maamula abaalmarinnada Oscars ayaa kulan degdeg ah leh si ay uga baaraan dagaan doorka uu mustaqbalka yeelan doono Harvey Weinstein, arrintaas oo dabo socota eedaymaha tacadiyada galmada ee loo soo jeediyay.
Akaadeemiyadda hormarinta aflaanta ee The Academy of Motion Picture Arts and Sciences ayaa sheegtay in tacadiyada galmada ee loo haysto Weinstein ay yihiin “karaahiyo aan la aqbali karin”.
Akaadeemiyadda aflaanta Britain ee Bafta loo soo gaabiyo ayaa iyadu sheegtay in ay laashay xubinnidamiisii.
kaadeemiyadda Aflaanta ee Maraykanka ayaa 81 abaalmarin oo Oscar ah siisay shirkadda Miramax ee soo saare Weinstein. Waxayna sheegtay in ay Sabtida kulmi doonaan si ay “u falanqeeyaan eedaymaha ka dhanka ah Weinstein iyo tallaabada ay qaadanayso akaadeemiyadda”.